२ तिहाईको ओली सरकार जनताको भरोसा गुमाऊदै। - Himalay Online Media
२ तिहाईको ओली सरकार जनताको भरोसा गुमाऊदै।
दैनिक पत्रिकाका ज्याकेटमा नयाँ युगको सुरुवात लेखेर ज्याकेट बिज्ञापन प्रकासित गर्दैमा नयाँ युग सुरुवात हुने भए किन हामी नेपाली पछाडी पर्नु पर्थ्यो होला? अलोकपृय हर्कत गर्दै केपी ओली सरकारले आम नेपालीलाई लाज लाग्ने गरि हसाऊन थालेको छ ।
दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले केके राम्रा काम गर्यो भनेर आम नागरिकहरुलाई सोध्यो भने ऊत्तर दिन सक्ने जनता भेटाऊन अप्ठेरो छ । यो सरकारले नराम्रो काम के के गर्यो भनेर प्रश्न सोध्यो भने ऊत्तर दिनेहरुको लाईन लाग्न थालेको छ । आखिर किन यस्तो भईरहेको छ नेपालमा ? के अयोग्य प्रधानमन्त्री, बिलासी राष्टपती, भष्ट्र मन्त्री कर्मचारी भएर हो त ? वा प्रतिपक्षले गलत प्रचार गरेर ? या २ तिहाईको सरकार भएको देशमा सरकारका राम्रा कामको प्रचारप्रसार गरिदिने समर्थक र संञ्चार माध्यमको अभावको कारण ?
यो सरकारले सुरु गरेको सुनकाण्ड अप्रेसन निस्कर्षमा नपुराई साम्य पारियो भन्ने जनताको गम्भिर असन्तुष्टी छदैछ । यातायात सिण्डिकेट २/४ दिन चर्चा बटुल्नकै लागी उछालीयो परिणामत: सिण्डिकेट रोकिएन । अर्बौका घोटालाकाण्ड, कुखुराको अण्डामा समेत tax/vat काण्ड, बलत्कारका त कुरै छोडौ । राष्ट्रपतीको गाडी खरिद काण्ड, प्रमको चिन भ्रमण काण्ड, ….. यस्ता साना ठुला काण्डको लिष्ट निकाल्ने हो भने त एउटा किताबनै बन्छ । तर सरकारले आम जनताको हितहुने कामहरु गरेर परिणाम नदिदा सर्बसाधारण जनता आक्रोसित हुनु स्वभाबिक छ ।
देश भित्र माहानगरपालीका, उपमाहानगरपालीका भित्रका खाल्डाखुल्डी, धुलो, फोहोर, ढल र जामले बिचलित छ । सरकार पुर्वपस्चिम रेलको कुरा गरेर, ठुलाठुला कुरा गरेर हसाऊछ । कृषि प्रधान देशका नेपाली जनता भारत बाट आएको तरकारी किनेर खान बिवस छ, सरकार खानका लागी दुख गर्नु पर्दैन बिस्तारामा भात आऊछ भन्छ । नेपालका पाहाडी जिल्ला र पाहाडी जमिन मसानघाट जस्तै सुन्य र ऊपयोगहिन भएका छन । पहुचवालाहरु सामान्य काम र आर्कषक योजना देखाएर सरकारी अनुदान दुरुपयोग गरिरहेका छन । सरकार त्यसको नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अनुदानका नया नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेर लोकप्रिय बन्ने ध्याऊन्नमा उद्दत देखिन्छ ।
देशमा २ तिहाईको सरकार छ, एऊटी बच्ची बलत्कार भएको महिनौ पुग्दा सम्म कार्वाही गर्न सक्दैन । अधिकाशं जनता (दुईतिहाई भन्दा धेरै) सरकारको समर्थनमा छन, तर पनि जनताले सरकारको बिरोध गर्यो भने प्रतिपक्षलाई दोष दिएर चोखिने चेष्टा गर्छ । सरकारका समर्थक नेपाली (अधिकम्श) जनता सरकार प्रतिको असन्तुष्टीलाई मनमा च्यापेर चुपचाप छन । प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस आन्तरिक खिचातानी र झैझगडामा अलमलिएको छ । यस्तो दुराअबस्था पनि दुईतिहाई सक्ति प्राप्त सरकारको प्रमुखले बिकास र समृद्धीलाई उखान र ठट्टाको बिषय बनाऊदा कुन नेपालीको मन नरुदो हो ?
बिकास योजना सहितको बौद्धिक भिजन भएको राजनैतिक नेतृत्व सहितको नया राजनैतिक सक्तिको पक्षमा नेपाली जनताले बेलैमा बिस्वास नगर्ने हो भने नेपाल र नेपालीको अस्थित्व छिटै डुब्ने छ । डुब्न बाट बचाऊने कुनै राजनैतिक माझी पाऊन अप्ठेरो देखिन थालेको छ ।
गन्तब्यहिन यात्रा नगरौ आफु सचेत हौ अरुलाई पनि सचेत गराउ
रोजगारीका लागि विदेश आउन अब म्यानपावरसंग झुक्नु नपरोस्
बिर्सियका राष्ट्रनिर्माता तथा राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाह
बिदेशबाट फर्किएकाहरुको संगठन बिस्तार अभियान तिब्र।
नेपाली सेनामा खुल्यो साढे तीन हजारका लागि जागिर।